Jurgen Klopp oo niyad xumo ka muujiyay fursadda ay u heystaan iney helaan xidigii badali lahaa Philippe Coutinho. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Jurgen Klopp oo niyad xumo ka muujiyay fursadda ay u heystaan iney helaan xidigii badali lahaa Philippe Coutinho.
Tababare Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisa aysan cadaadis saari doonin RB Leipzig si ay ugu ogolaadaan helitaanka Naby Keita oo la dareensan yahay inuu buuxin karo booska Philippe Coutinho.
Reds iyo kooxda ka dhisan Bundesliga ayaa heshiiyay xagaagii lagasoo gudbay, waxaana la isku afgartay in Naby Keita uu Anfield yimaad bartamaha sanadkaan, walow uu ka gudbay tijaabada caafimaad isla markaana lasoo bandhigay lambarkiisa.
Si kastaba waxaa soo baxay warar sheegaya in Reds ay u dhaqaaqi doonto xidigaan si uu badalka Coutinho u galo, sidoo kalana warbixino ka imaanaya Jarmalka ayaa qiraya in RB Leizpig aysan diyaar u aheyn iney bixiso.
“Fahamkeyga wuxuu yahay ineysan jirin wax arintaas ku saabsan oo laga hadlo” ayuu yiri Klopp oo la hadlayay warbaahinta. “Waa ciyaariyahan ka tirsan Leipzig, taasi waa waxa aan ogahay, xagaagana inta ayuu imaanayaa, taasina waa wax aan ogahay sidoo kale”